Torohevitra ho an'ny mpianatra amin'ny taona voalohany - Victor Mochere
Dingana mampientam-po eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanombohana eny amin'ny oniversite, saingy mety ho sahiran-tsaina na mampatahotra izany indraindray, indrindra raha nanapa-kevitra ny hianatra any ivelany ianao. Raha mianatra any amin'ny oniversite any amin'ny tanàna lavitra ianao, dia manantena ny hahatsapa fientanentanana amin'ny fihaonany amin'ny olona vaovao sy ny fananganana namana vaovao, fa koa ny fahatsapana alahelo. Raha izao no andro voalohany any amin'ny oniversite rahampitso ary mifoha mandritra ny alina ianao, mitady toro-hevitra sy fika mba ho tafavoaka velona amin'ny andro voalohany amin'ny oniversite, atsaharo eto. Nanasongadina ny sasany amin'ireo toro-hevitra izay hanampy anao ho tafavoaka velona sy hanana taona voalohany mahavariana amin'ny oniversite izahay.
1. Aza manahy ny amin'ny ho avy
2. Fiaraha-miasa amin'ny olona marina
3. Tsy maninona raha miova hevitra ianao
4. Aza manandrana miditra
5. Tsy afaka manaitra ny olona rehetra ianao
6. Ataovy lohalaharana ny fanatrehana
7. Aza miovaova
8. Aza mangataka andro
9. Fantaro ireo mpampianatra anao
10. Mampitombo fahazarana mahasalama
11. Mifandraisa tsy tapaka amin'ny ankohonanao
12. Mialà sasatra
13. Mitadiava fanampiana
14. Manaova fahatsiarovana
Raha vantany vao manomboka ny oniversite dia mirona amin'ny fanahiana ny ho avy ny mpianatra. Raha manahy momba andraikitra be dia be ianao dia tsy mila fotsiny, toa manampy ny anjaran'ny oniversite misy foana. Ary ho an'ny sisa amin'ny olana rehetra, aza manahy, maka andro iray rehefa tonga izany.
Toy ny taranja dia ho mianatra zavatra betsaka momba ny olona koa ianao. Hihaona amin'ny karazana namana isan-karazany ianao ary mila manapa-kevitra hoe iza amin'ireo no ho anisan'ny fiainanao. Ka alao antoka fa ao amin'ny orinasa mety ianao. Raha mahatsapa ianao fa misy karazana orinasa tsy manome lanja ny hoavinao fa misarika anao lavitra ny fahitanao dia tonga ny fotoana hanovana ny orinasa miaraka aminao.
Ny fisafidianana lohahevitra ho an'ny taona voalohany dia mety hahagaga. Ary toy izany koa ny fisafidianana ireo hetsika ivelan'ny fampianarana na fandraisana anjara hafa. Raha nisoratra anarana tamin'ny zavatra nataonao ianao nefa tsy hitanao fa mahaliana dia tsara ny manova ny lohahevitra na ny hetsika. Hamarino fotsiny fa manaraka ny fitsipika ianao ary mampahafantatra amin'ny lohan'ny departemanta tsirairay ny momba ny fanovana safidy nataonao.
Ary amin'izany, tsy midika akory izany hoe tsy tokony hiezaka ny hifanerasera isika. Ny tianay holazaina dia ny tsy manova ny maha-izy anao na ny toetranao ho zavatra rehetra. Mety ny fampifanarahana sasany sy ny fanovana vitsivitsy, fa raha tsy "ianao" dia ajanony avy hatrany ny fanaovana izany.
Ny oniversite dia toerana lehibe. Misy olona ho tia anao ary ny sasany tsy ho tianao. Tsy maninona raha tojo olona toy izany ianao. Miezaha ho tsara amin'izy ireo fotsiny, fa aza lany andro manandrana mampiaiky volana azy ireo.
Na dia tsy dia mahafinaritra aza ny fandalovana kilasy na inona na inona ary toa zavatra mahafinaritra ny zavatra rehetra, dia andramo ny hisorohana an'izany. Ataovy lohalaharana ny fanatrehana kilasy sy ny fanatrehana fanatrehana tsara. Ho mora izany raha vao lasa fahazarana.
Raha manatrika kilasy ianao dia andramo hamita ilay asa nomena amin'io andro io ihany. Ity tsy fitoviana ity dia hanampy anao amin'ny famitana andraikitra, amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fitsapana, ary amin'ny fijanonana ho vaovao miaraka amin'ilay rafitra.
Ny fiainana any amin'ny oniversite dia natao hahafinaritra. Ny mpitarika anao rehetra dia hanana fifanakalozan-kevitra momba ny fomba nandaniany fotoana tany amin'ny oniversite izay misy fifaliana bebe kokoa ary kely kokoa ny fianarana. Tandremo anefa fa tsy afaka mifanakalo hevitra momba ireo ianao raha tsy efa nahavita asa nahomby tamin'ny taona maro. Aza mangataka andro ary manao ny zava-drehetra amin'ny fotoana mety. Hanampy anao hijanona ho salama ara-batana sy ara-tsaina ihany koa izany.
Ny mpampianatra anao dia toy ny fianakavianao any amin'ny oniversite. Mazava ho azy, hisy andiana mpampianatra tianao, tsy tianao na tianao mihoatra ny antenaina. Saingy izy ireo no mpanoro hevitra anao izay hanampy anao handia ny dingana rehetra amin'ny fiainana amin'ny oniversite. Miezaha ary manana fifandraisana salama sy tsara amin'izy ireo.
Manana fiainana ara-tsosialy ianao, be dia be ny anjaranao, kilasy tokony harahina, hetsika ivelan'ny fandaharam-pianarana, ary zavatra maro tokony hatao. Amin'izay dia mora very. Ka miezaha hifantoka amin'ny tenanao ary omeo fotoana-potoana. Miezaha hanana fahazarana mahasalama, misotroa rano betsaka, manao fanatanjahan-tena, fadio ny alina raha tsy tena ilaina izany, sns.
Malahelo anao ny fianakavianao toa anao tsy hitanao. Nefa amin'ny zavatra maro be amin'ny fiainanao dia mety hirona tsy hiraharaha azy ireo ianao na tsy manam-potoana firy ho azy ireo. Ka miezaha hanao fahazarana miresaka amin'izy ireo ary lazao azy ireo ny momba ny fiadananao farafaharatsiny farafahakeliny indroa. Ny fitazonana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana dia zavatra tena ilaina mandritra ny fotoam-pianarana.
Tsy maninona ny tsy mahita kilasy na fiaraha-mientana ataon'ny vondrona raha toa ianao ka kivy sy te hiala sasatra. Aza atao fahazarana fotsiny. Zava-dehibe amin'ny vatana ny fitsaharana. Ary raha milaza ny tenanao hiala sasatra ny vatanao dia tsy maintsy mihaino azy avy hatrany ianao.
Aza matahotra mihitsy mangataka fanampiana. Vonona hanampy hatrany ny olona na mpiara-miasa na namana na mpampianatra ianao. Ny hany tokony hataonao dia ny manontany. Ary manontania amin'ny fotoana mety. Aza miandry ny toe-javatra manjary mavesatra na tsy misy tanana intsony.
Tsy isalasalana fa any amin'ny oniversite ianao mba hanana ho avy mamirapiratra fa aza adino ny manao fahatsiarovana eny an-dalana. Raha vantany vao miditra amin'ny tontolon'ny fanaovana asa ianao dia hanana andraikitra lehibe. Ka raha mbola eny amin'ny oniversite ianao dia makà fotoana ho an'ny namana sy fianakaviana ary mifalia miaraka aminy. Manaova fahatsiarovana rehefa miposaka ny masoandro.
Ny fandehanana any amin'ny oniversite dia mety ho zavatra mahaliana sy mahavariana. Ho hitanao fa manana lolo ao an-kibo ianao ary koa fahatsapana hafanam-po hafahafa. Nefa tadidio fa mandeha tsara ianao ary amin'ny farany dia hilamina ny zava-drehetra.
Ahoana ny fomba hampiasana ny Microsoft Office amin'ny PC maimaim-poana
Vahaolana azo ampiharina mba hivelomana amin'ny vanim-potoanan'ny fiainana mampiady saina
Toerana 5 tsara indrindra hitsidihana sy hipetrahana
Postep giganta: Valve zaczyna ulepszać Dotę 2
Ahoana ny fomba hiarovana ny smartphone anao